Jebinta xanta: Apple wuxuu soo bandhigi doonaa iPad cusub 10,2-inji ah | Wararka IPhone
Tanina waa wax sida caadiga ah dhaca daqiiqado ka hor intaan la is qorin. Markay sidaa tahay, xantu waxay ku imaaneysaa qaab iPad, Ipad ah oo aan horey ugu aragnay xanta hore oo ay lahaan laheyd shaashad 10,2 inji ah sida lagu sharaxay ilaha shabakada.
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan inaan arki doonno iPhones cusub, Apple Watch Series 5 iyo wax kale. Tani "wax kale" waxay ahaan laheyd hada sida ku cad wararka xanta ah dhawaanahan nooc cusub oo iPad ah oo leh shaashad aan horay ugu aragnay xanta.
Saadaalinta la cusbooneysiiyay: iPhone 11, iPhone Pro, iPhone Pro Max. https://t.co/pymVRR3dcQ
- Mark Gurman (@markgurman) 10 September ee 2019
Saadaasha Gurman. In ka badan oo caan ah Mark Gurman, wuxuu xaqiijinayaa saadaashiisa iPhone-ka cusub oo leh magacyada iPhone 11, iPhone Pro, iPhone Pro Max iyo sidoo kale wuxuu sii wadaa inuu sii wado inaan sii wadno inaan aragno iPad cusub iyo MacBook Pro cusub oo ku saabsan qodobkaan. Waxa aan meesha ka saari karin ayaa ah in Apple ay diyaarisay wax lala yaabo oo ku saabsan soo bandhigida galabta iyo Gurman, kiiskan, waa khabiir ku takhasusay sidaa darteed waxaan u maleyn karnaa in alaabadani ay ku dhamaan doonaan in la arko saacado yar gudahood.
Apple waxay soo saari kartaa iPad cusub oo 10.2-inji ah iyo 10.5-inji kale
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in shirkadu xoogaa amar ku bixiso alaabteeda iyada oo kiiskan uu ku jiro iPad-ka waa lagama maarmaan. Waxaan u maleyn karnaa in tusaalooyinka 10,2-inch ay beddeli doonaan moodooyinka hadda jira ee 9,7-inji tanina waxay war weyn u noqon doontaa in badan oo naga mid ah maadaama ay macnaheedu tahay koror ballaaran oo cabbirka shaashadda ah iyada oo aan kor loo qaadin qiimaha aad u badan marka la barbar dhigo moodooyinka Pro. Waa inaan in yar sugno si aan u aragno faahfaahinta bandhiggan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Jebinta xanta: Apple wuxuu soo saari doonaa iPad cusub oo 10,2-inji ah
Tim Cook wuxuu bilaabayaa "ShotoniPhone" gaar ah, ma wuxuu la jiri doonaa iPhone-ka cusub?